သင်ဘာကြောင့် ကုမဿပဏီကြီးမှာ လုပ်သင့်သလဲ - MyWorld
သင်ဘာကြောင့် ကုမဿပဏီကြီးမှာ လုပ်သင့်သလဲ
Posted on 4/11/2015 by လူအများဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး စလုပ်သင့်ပြီးလား၊ ကုမဿပဏီသေးသေးလေးမှာပဲ ဝင်လုပ်သင့်လား သို့တည်းမဟုတ် ကုမဿပဏီ ကြီးမှာ လုပ်သင့်သလား ဆိုတာ အမြဲတမ်း ခေါင်းစားတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးကို MyWorld က ဖြေပေးနိုင်ပေမယ့် ဘောလောဆယ် ဘာကြောင့်မို့ ကုမဿပဏီ ကြီးမှာ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဖြေပေးပါရစေ။ ဒီလိုပြောလို့ အခြားကို မလုပ်နဲ့လို့မဆိုလိုပါ။ Startup သို့တည်းမဟုတ် မိမိကိုယ်ပိုင်စမယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လို ကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို နောက်မှ ဖော်ပြပါ့မယ်။ လောလောဆယ် ကုမဿပဏီ မှာ လုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းများကို လေ့လာကြည့်ရအောင်..
ကုမဿပဏီကြီးတွေမှာ သေချာပြုလုပ်ထားတဲ့ Training program တွေရှိတယ်
1. ကုမဿပဏီ ကြီးတွေမှာ နည်းပညာအတွက်၊ Business အတွက်၊ HR management, Intellectual အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အရည်အချင်းများ အတွက် သင့်ကို သင်ကြားပေးတဲ့ အစီစဉ်ကောင်းများ များစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါကို သင် တစ်နေ့ ကုမဿပဏီ ထောင်ထဲအခါမှာ လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
2. သင့်ထက် အတွေ့အကြုံများ အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ လူတော်များကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သင့် တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာ Algorithm တွက်နေချိန်မှာ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ မြင်နေရတဲ့ လူတော်တွေပေါ့။
3. ဈေးကြီးပြီး သာမန်လူ မဝယ်နိုင်တဲ့ tool တွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ကို မြင်ရမယ် သုံးရမယ်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုလည်း အင်ဂျင်နီယာ အလျောက်၊ ဒီဇိုင်နာဆိုရင်လည်း ဒီဇိုင်နာ အလျောက် ဈေးကြီး ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရပြီး တစ်နေ့ က်ိုယ့အတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
4. ကုမဿပဏီ ထဲကရော ကုမဿပဏီ အပြင်ကရော လူကောင်းများ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းများ ရရှိပြီး တစ်နေ့ ကိုယ်ပိုင်စတဲ့အခါ သူတို့တွေက ကိုယ့်အတွက် ဖောက်သည်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
5. ငွေကြေး အမြောက်အများကို အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ပရောဂျက်တစ်ခုကို သိန်း ၅၀ ကနေ စလို့ သိန်း ထောင်ချီ သောင်းချီ ပရောဂျက်တွေကို ကိုင်ရတဲ့အခါ အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိပါလိ့မ်မယ်။
6. အမြင်ကျယ်စေပါတယ်။ Scope of work က ကုမဿပဏီကြီးမှာ ငွေကြေးများသလို လုပ်ရတာလည်း ကြီးကျယ် ခမ်းနာတာကြောင့် တစ်နေ့ မိမိလုပ်ငန်းစတဲ့အခါ အထောက်အပံ့ကောင်းပါပဲ။
7. entrepreneur ဖြစ်ချင်သူများအတွက် ကုမဿပဏီ ကြီးတွေမှာ intrapreneur အခွင့်အရေးတွေပေးပါတယ်။ ကုမဿပဏီကြီးတွေမှာ ရုံးတွင်း စွန့်ဦးတီထွင်ချင်သူများကို ပေါ်ပေါက်စေရေးဖြစ်ပြီး innovative ဖြစ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
8. သင် ခရီးတွေ အများကြီးသွားရ ပါလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှု အသစ်တွေ၊ စနစ်သစ်တွေကို လေ့လာရပါမယ်။ အမြင်ကျယ်စေရန် အဓိက သော့ချက်တစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
9. အချို့လူတွေအတွက် ကုမဿပဏီ ကြီးမှာ လုပ်ရတာကို ပျော်ရွှင်စရာ ဘဝတစ်ခု အဖြစ် ရှာတွေ့ စေပါလိမ့်မယ်။
10. ကုမဿပဏီကြီးတွေမှာ rotation program ရှိပါတယ်။ မိမိကို ရာထူး တစ်ခု နေရာ တစ်ခုတည်းမှာပဲ အမြဲ ထားလေ့ မရှိပါဘူး။ မိမိရဲ့ အရည်အချင်းပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ဌာနပြောင်းရမှု၊ ရာထူးတိုးတက်မှု၊ လစာတိုးတက်မှုများ ရှိပါတယ်။
11. ကုမဿပဏီကြီးတွေထဲမှာ မိမိလိုပဲ စွန့်ဦးတီထွင်သူ ဖြစ်ချင်သူများလည်း ရှိနိုင်တာကြောင့် သူတို့နဲ့လည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ ဥပမာ များစွာလည်း ရှိပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူ ဖြစ်ချင်သူများအနေနဲ့ Coporate အဆင့်လောက် အနည်းဆုံး ရှိတဲ့ ကုမဿပဏီကြီးတွေမှာ ဝင်လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၁ နှစ်ကနေ နေပြီးတော့ မိမိ လုပ်ငန်းစရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးခင်အထိပေါ့။ အကယ်၍ မိမိကိုယ် မိမိ ကုမဿပဏီကြီးမှာ ရှာတွေ့သွားတယ်ဆိုရင်လည်း ဆက်လုပ်ပါ။ Google ရဲ့ လက်ရှိ စီအီးအို အိန္ဒိယ လူမျိုး အင်ဂျင်နိယာဟာ ဆိုရင်လည်း Google မှာ ဆယ်နှစ်ကျော်မက လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းအဆင့်ကနေ အမှုဆောင်ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
2 days ago by Mon Mon
22 days ago by Simon Bruce